သမိုင်းတစ်လျောက် တန်ဖိုးအကြီးဆုံး သေနတ် ( ၁၀ ) လက်.....
သမိုင်းခေတ်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်သူတွေအပါအ၀င်ပါပဲ၊ ခေတ်သမိုင်းတွေရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းမှာ သေနတ်တွေကလည်း အပါအဝင်ပါ။
ဒီလက်နက်တွေမှာ တစ်ချို့သေနတ်တွေဟာ ရှားရှားပါးပါး ပြိုင်စံရှားပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခင်ဗျားတို့ အလိုချင်ဆုံးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ချို့သောသူတွေ ငွေကြေးတောင်ပုံရာပုံနဲ့ အဖိုးအနဂ္ဃပေး ဝယ်ကြတဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက် တန်ဖိုးအကြီးဆုံး သေနတ် ဆယ်လက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
10. Gold 7.65mm Walther PP Owned by Hitler
Gold 7.65mm Walther PP ပစ္စတိုကတော့ သမိုင်းတစ်လျှောက် တန်ဖိုးအကြီးဆုံး အဆင့် တစ်ဆယ်မှာ ရှိပါတယ်။ ဒီပစ္စတိုရဲ့ ပိုင်ရှင်ကတော့ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကို ဖန်တီးသွားတဲ့ အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟစ်တလာရဲ့ ၁၉၃၉ ခုနှစ် အသက် ၅၀ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ Carl Walther က လက်ဆောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ပစ္စတိုသေနတ်ပါ။
ရွှေနဲ့ အပြောက်အမွှမ်းတွေ တန်ဆာဆင်ထားပြီး ဟစ်တလာရဲ့ လက်မှတ်တိုနဲ့ ဆင်စွယ်ရိုးတပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကတော့ ဒေါ်လာ ၁၁၄၀၀၀ ပါ။
9. Elvis Presley’s Revolvers
အဲလ်ဗစ်ပရက်စလေရဲ့ ခြောက်လုံးပြူးတွေပါ။ ဘယ်လို ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ မတူတဲ့ သေနတ်နှစ်လက်ပါပဲ။
Colt Python double-action ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ Smith & Wesson Model 19-2 double-action ခြောက်လုံးပြူးတွေဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးတွေကတော့ ဒေါ်လာ ၁၇၂၅၀၀ နဲ့ ၁၉၅၅၀၀ ဒေါ်လာ ဈေးရှိပါတယ်။
ဒီနှစ်လက်စလုံးကို ပရက်စလေကိုယ်တိုင် Beverly Hills California မှာ ဝယ်ယူထားခဲ့တဲ့ သေနတ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
8. Peter Hofer Sidelock
သြစတြီးယား၊ ဖာလက်ရ်ှက ပီတဟူဖာ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Peter Hofer Sidelock မောင်းချိုးနှစ်လုံးပြူးသေနတ်တွေပါ။ ပီတာဟူဖာဟာ ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံး သေနတ်တွေ ထုတ်လုပ်သူများက တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သစ်လွင်ဆန်းသစ်တဲ့ လက်ရာတွေနဲ့ တန်ဖိုးကြီးသေနတ်တွေ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ သူ ဖန်တီးထုတ်လုပ်သမျှ သေနတ်တွေတိုင်းဟာ အပြောက်အမွှမ်း အဆင်တန်ဆာတွေ ခြယ်သထွင်းထုထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
7. The Boss Over and Under
၁၈၁၂ ခုနှစ်မှာ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့ Boss & Co သေနတ်ကုမ္ပဏီဟာ နှစ်သက်တမ်း ၂၀၀ ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီပါပဲ။ သေနတ်ဒီဇိုင်းသစ်တွေ ထုတ်လုပ်ရာလည်း ဖြစ်ပြီး ၁၉၀၉ ခုနှစ်မှာ အလွန်လူကြိုက်များတဲ့ သေနတ်ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မောင်းချိုးတစ်လုံးထိုး သေနတ်ပါ။ ဒီသေနတ်ရဲ့ လက်ရှိခေတ်ဗားရှင်းကတော့ ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံး သေနတ်တွေမှာ အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၁၀၅၀၀၀ ဝန်းကျင်မှာ ရှိပါတယ်။
6. VO Vapen (Falcon Edition)
VO Vapen(Falcon Edition) ရိုင်ဖယ်သေနတ်ပါ။ အာရပ်တွေရဲ့ သိမ်းငှက်နဲ့ အမဲလိုက်ကြတဲ့ ဓလေ့ကို စိတ်ကူးယူပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ VO Vapen(Falcon Edition) ဟာ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး သေနတ်တွေမှာ အပါအဝင် ဖြစ်လာပါတယ်။
VO Vapen(Falcon Edition) လို အလွန်လှပတဲ့ သေနတ်မျိုး မြင်ဘူးချင်မှ မြင်ဘူးလိမ့်ပါမယ်။ ဆွီဒင်နိုင်ငံက VO Vapen လက်နက်လုပ်ငန်းကို ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှာ သေနတ်လုပ်သူ Viggo Olsson က ထူထောင်ပြီး လက်ဖြစ်ရိုင်ဖယ်တွေ ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
VO Vapen(Falcon Edition) သနတ်တွေဟာ ပေါင် ငါးသိန်းလောက် တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
5. Teddy Roosevelt’s Shotgun
အမေရိကန်သမ္မတ သီယိုဒိုရုစဗဲ့ပိုင် မောင်းပြန်သေနတ်ပါ။ ရုစဗဲ့ဟာ ၁၉၀၁ ကနေ ၁၉၀၉ အထိ အမေရိကန်သမ္မတ အဖြစ်သာမကပဲ ကျွမ်းကျင်တဲ့ မုဆိုးတစ်ဦးလည်းပဲ ဖြစ်ပြီး လက်နက်ဝါသနာအိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူပိုင် သေနတ်တွေက F-Grade A.H ပြောင်းချောသေနတ်ဟာ ဒေါ်လာ ၈၆၂၅၀၀ ဒေါ်လာဈေး ရှိပါတယ်။
4. Gold-Inlaid Colt Model 1849 Pocket Revolver
ရွှေနဲ့ လုပ်ထားပြီး အပြောက်အမွှမ်းတွေ တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ Colt Model 1849 အိတ်ဆောင် ခြောက်လုံးပြူးဟာလည်း ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးထဲက သေနတ်တစ်လက်ပါပဲ။
ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ ဒီခြောက်လုံးပြူးကို ကြည့်မိမယ်ဆို တစ်နာရီလောက် ထိုင်ကြည့်နေပြီး အံ့သြနေရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သေနတ်ရဲ့ ဖရိတ်မှာ ဝက်ဝံ၊ ခွေး၊ ကျားသစ်၊ ဒေါင်းနဲ့ မြေခွေးတွေရဲ့ ပုံကို ရေးထွင်းထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
3. 1886 Winchester Rifle Owned by Henry Ware Lawton
အမေရိကန်ဗိုလ်ကြီး Henry Ware Lawton ပိုင် 1886 Winchester ရိုင်ဖယ်ပါ။ ဗိုလ်ကြီး လောတန်ဟာ အပါချီလူမျိုးစုခေါင်းဆောင် ဂျာရိုနီမိုထံ အဖမ်းခံရပြီး သူ့ ဒီရိုင်ဖယ်ကို အပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီတိုက်ပွဲသမိုင်းနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ ရိုင်ဖယ်ဟာလည်း တန်ဖိုးတစ်ရပ်နဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး သေနတ်တွေရဲ့ စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
2. Nicolas-Noel Boutet Rifled Flintlock Pistols
Nicolas-Noel Boutet ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စတိုသေနတ်တွေပါပဲ။ Boutet ဟာ ဆယ့်ခြောက်ယောက်မြောက် လူဝီဘုရင်လက်ထက်မှာ လက်နက်အရာရှိဖြစ်ပြီး အင်ပါယာပြည့်ရှင် နပိုလီယံလက်ထက် လက်နက်အရာရှိချုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
1. Big Bang Pistol Set
Big Bang Pistol တစ်စုံပါ။ Cabot Guns ကုမ္ပဏီဟာ ဥက္ကာခဲကနေ ပြိုင်ဖက်ကင်း ပစ္စတိုနှစ်စုံကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Big Bang Pistol အစုံမှာ ဘယ်ညာ ပစ္စတိုနျှစ်လက် ပါရှိပါတယ်။
နှစ်ဘီလီယံချီ ဥက္ကာခဲကနေ ဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်တာပါ။ တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ လက်ရှိ စံချိန်တင်ထားတာဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၄၅၀၀၀၀၀ ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
သမိုငျးခတျေတှကေို ပွောငျးလဲပဈသူတှအေပါအဝငျပါပဲ၊ ခတျေသမိုငျးတှရေဲ့ ကွီးမားတဲ့ အစိတျအပိုငျးမှာ သနေတျတှကေလညျး အပါအဝငျပါ။
ဒီလကျနကျတှမှော တဈခြို့သနေတျတှဟော ရှားရှားပါးပါး ပွိုငျစံရှားပွီး ကမ်ဘာပျေါမှာ ခငျဗြားတို့ အလိုခငျြဆုံးတှေ ဖွဈနိုငျပါလိမျ့မယျ။
တဈခြို့သောသူတှေ ငှကွေေးတောငျပုံရာပုံနဲ့ အဖိုးအနဂ်ဃပေး ဝယျကွတဲ့ သမိုငျးတဈလြှောကျ တနျဖိုးအကွီးဆုံး သနေတျ ဆယျလကျကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
Gold 7.65mm Walther PP ပစ်စတိုကတော့ သမိုငျးတဈလြှောကျ တနျဖိုးအကွီးဆုံး အဆငျ့ တဈဆယျမှာ ရှိပါတယျ။ ဒီပစ်စတိုရဲ့ ပိုငျရှငျကတော့ ကမ်ဘာ့သမိုငျးမှာ ဒုတိယကမ်ဘာစဈကွီးကို ဖနျတီးသှားတဲ့ အဒေါ့ဖျဟဈတလာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဟဈတလာရဲ့ ၁၉၃၉ ခုနှဈ အသကျ ၅၀ နှဈပွညျ့ မှေးနမှေ့ာ Carl Walther က လကျဆောငျပွုလုပျပေးတဲ့ ပစ်စတိုသနေတျပါ။
ရှနေဲ့ အပွောကျအမှမျးတှေ တနျဆာဆငျထားပွီး ဟဈတလာရဲ့ လကျမှတျတိုနဲ့ ဆငျစှယျရိုးတပျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ စြေးကတော့ ဒျေါလာ ၁၁၄၀၀၀ ပါ။
အဲလျဗဈပရကျစလရေဲ့ ခွောကျလုံးပွူးတှပေါ။ ဘယျလို ခွောကျလုံးပွူးနဲ့ မတူတဲ့ သနေတျနှဈလကျပါပဲ။
Colt Python double-action ခွောကျလုံးပွူးနဲ့ Smith & Wesson Model 19-2 double-action ခွောကျလုံးပွူးတှဖွေဈပွီး တနျဖိုးတှကေတော့ ဒျေါလာ ၁၇၂၅၀၀ နဲ့ ၁၉၅၅၀၀ ဒျေါလာ စြေးရှိပါတယျ။
ဒီနှဈလကျစလုံးကို ပရကျစလကေိုယျတိုငျ Beverly Hills California မှာ ဝယျယူထားခဲ့တဲ့ သနေတျတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
သွစတွီးယား၊ ဖာလကျရျှက ပီတဟူဖာ ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ Peter Hofer Sidelock မောငျးခြိုးနှဈလုံးပွူးသနေတျတှပေါ။ ပီတာဟူဖာဟာ ကမ်ဘာစြေးအကွီးဆုံး သနေတျတှေ ထုတျလုပျသူမြားက တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။
သဈလှငျဆနျးသဈတဲ့ လကျရာတှနေဲ့ တနျဖိုးကွီးသနေတျတှေ ထုတျလုပျပါတယျ။ သူ ဖနျတီးထုတျလုပျသမြှ သနေတျတှတေိုငျးဟာ အပွောကျအမှမျး အဆငျတနျဆာတှေ ခွယျသထှငျးထုထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
၁၈၁၂ ခုနှဈမှာ ဖှဲ့စညျးတညျထောငျတဲ့ Boss & Co သနေတျကုမ်ပဏီဟာ နှဈသကျတမျး ၂၀၀ ရှိပွီ ဖွဈတဲ့ ကုမ်ပဏီပါပဲ။ သနေတျဒီဇိုငျးသဈတှေ ထုတျလုပျရာလညျး ဖွဈပွီး ၁၉၀၉ ခုနှဈမှာ အလှနျလူကွိုကျမြားတဲ့ သနေတျကို ထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ။
မောငျးခြိုးတဈလုံးထိုး သနေတျပါ။ ဒီသနေတျရဲ့ လကျရှိခတျေဗားရှငျးကတော့ ကမ်ဘာစြေးအကွီးဆုံး သနေတျတှမှော အပါအဝငျဖွဈပွီး ဒျေါလာ ၁၀၅၀၀၀ ဝနျးကငျြမှာ ရှိပါတယျ။
VO Vapen(Falcon Edition) ရိုငျဖယျသနေတျပါ။ အာရပျတှရေဲ့ သိမျးငှကျနဲ့ အမဲလိုကျကွတဲ့ ဓလကေို့ စိတျကူးယူပွီး ထုတျလုပျတဲ့ VO Vapen(Falcon Edition) ဟာ ကမ်ဘာ့စြေးအကွီးဆုံး သနေတျတှမှော အပါအဝငျ ဖွဈလာပါတယျ။
VO Vapen(Falcon Edition) လို အလှနျလှပတဲ့ သနေတျမြိုး မွငျဘူးခငျြမှ မွငျဘူးလိမျ့ပါမယျ။ ဆှီဒငျနိုငျငံက VO Vapen လကျနကျလုပျငနျးကို ၁၉၇၇ ခုနှဈမှာ သနေတျလုပျသူ Viggo Olsson က ထူထောငျပွီး လကျဖွဈရိုငျဖယျတှေ ထုတျလုပျတာဖွဈပါတယျ။
VO Vapen(Falcon Edition) သနတျတှဟော ပေါငျ ငါးသိနျးလောကျ တနျဖိုးရှိပါတယျ။
အမရေိကနျသမ်မတ သီယိုဒိုရုစဗဲ့ပိုငျ မောငျးပွနျသနေတျပါ။ ရုစဗဲ့ဟာ ၁၉၀၁ ကနေ ၁၉၀၉ အထိ အမရေိကနျသမ်မတ အဖွဈသာမကပဲ ကြှမျးကငျြတဲ့ မုဆိုးတဈဦးလညျးပဲ ဖွဈပွီး လကျနကျဝါသနာအိုးလညျးဖွဈပါတယျ။
သူပိုငျ သနေတျတှကေ F-Grade A.H ပွောငျးခြောသနေတျဟာ ဒျေါလာ ၈၆၂၅၀၀ ဒျေါလာစြေး ရှိပါတယျ။
ရှနေဲ့ လုပျထားပွီး အပွောကျအမှမျးတှေ တနျဆာဆငျထားတဲ့ Colt Model 1849 အိတျဆောငျ ခွောကျလုံးပွူးဟာလညျး ကမ်ဘာ့စြေးအကွီးဆုံးထဲက သနေတျတဈလကျပါပဲ။
ခငျဗြားတို့အနနေဲ့ ဒီခွောကျလုံးပွူးကို ကွညျ့မိမယျဆို တဈနာရီလောကျ ထိုငျကွညျ့နပွေီး အံ့သွနရေမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သနေတျရဲ့ ဖရိတျမှာ ဝကျဝံ၊ ခှေး၊ ကြားသဈ၊ ဒေါငျးနဲ့ မွခှေေးတှရေဲ့ ပုံကို ရေးထှငျးထားတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
အမရေိကနျဗိုလျကွီး Henry Ware Lawton ပိုငျ 1886 Winchester ရိုငျဖယျပါ။ ဗိုလျကွီး လောတနျဟာ အပါခြီလူမြိုးစုခေါငျးဆောငျ ဂြာရိုနီမိုထံ အဖမျးခံရပွီး သူ့ ဒီရိုငျဖယျကို အပျခဲ့ရပါတယျ။
ဒီတိုကျပှဲသမိုငျးနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ ရိုငျဖယျဟာလညျး တနျဖိုးတဈရပျနဲ့ ကမ်ဘာ့စြေးအကွီးဆုံး သနေတျတှရေဲ့ စာရငျးမှာ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
Nicolas-Noel Boutet ထုတျလုပျတဲ့ ပစ်စတိုသနေတျတှပေါပဲ။ Boutet ဟာ ဆယျ့ခွောကျယောကျမွောကျ လူဝီဘုရငျလကျထကျမှာ လကျနကျအရာရှိဖွဈပွီး အငျပါယာပွညျ့ရှငျ နပိုလီယံလကျထကျ လကျနကျအရာရှိခြုပျပဲ ဖွဈပါတယျ။
Big Bang Pistol တဈစုံပါ။ Cabot Guns ကုမ်ပဏီဟာ ဥက်ကာခဲကနေ ပွိုငျဖကျကငျး ပစ်စတိုနှဈစုံကို ဖနျတီးထုတျလုပျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ Big Bang Pistol အစုံမှာ ဘယျညာ ပစ်စတိုနြှဈလကျ ပါရှိပါတယျ။
နှဈဘီလီယံခြီ ဥက်ကာခဲကနေ ဖနျတီးထုတျလုပျလိုကျတာပါ။ တနျဖိုးအနနေဲ့ကတော့ လကျရှိ စံခြိနျတငျထားတာဖွဈပွီး ဒျေါလာ ၄၅၀၀၀၀၀ ပဲ ဖွဈပါတော့တယျ။